Blogspot မှာ မြန်မာလို ရေးရတာ အဆင်ပြေအောင်...
၁. Blogger.com ကနေ login လုပ်ပြီး Dashboard ကိုသွားပါ...
၂. dashboard ထဲက Setting ကိုရွေးပါ...
၃. Formatting ကို ထပ်ရွေးပါ...
၄. Formatting စာမျက်နှာကို ရောက်ပြီဆိုရင် Post Template ဆိုတာကို ရှာပါ... အောက်ဆုံးမှာ ရှိပါတယ်... post template text box ထဲမှာ အောက်က code ကို ထည့်လိုပ်ပါ...
(font face="Zawgyi-One") ဒီစာကို Select ပေးပြီးရေးပါ...(/font)
အပေါ်က code နဲ့ မရသူများ ခင်ဗျာ အောက်က code နဲ့ အစားထိုးကြည့်ပေးပါဦး ခင်ဗျား...
ကျတော်တော့ အပေါ်က ကုဒ်နဲ့ အဆင်ပြေနေတာ blogspot စရေးကတည်းကပါ...
(span style="font-family:Zawgyi-One;") ဒီစာကို Select ပေးပြီးရေးပါ...(/span)
မှတ်ချက် - ( ကို < အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ) ကို > အဖြစ် ပြန်ပြောင်းပါ...
၅. Save Settings ကို နှိပ်ပြီး ပြီဆိုရင် ရပါပြီ...
၆. Post အသစ်တင်တဲ့နေရာကို သွားပါ... Edit Html ကို မရွေးဘဲ... Compose ကို ရွေးထားရင် စာရိုက်တဲ့ နေရာမှာ “ဒီစာကို Select ပေးပြီးရေးပါ...” ဆိုပြီး ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်... ကဲဗျာ... အဲဒီစာကို Select ပေးပြီး ကိုယ်ကြိုက်တာ ရေးလို့ ရပါပြီ ခင်ဗျာ...
မှတ်ချက် - Zawgyi-One ဆိုသည့်နေရာတွင် မိမိသုံးမည့် Font နာမည်ထည့်ပါ...
Myazedi သုံးမည်ဆိုပါက Myazedi ဟုပြောင်းပါ...
MyMyanmar သုံးမည်ဆိုပါက MyMyanmar ဟု ပြောင်းထည့်ပါ...
Blog စာမျက်နှာ တစ်ခုလုံးမှာ Zawgyi-One နဲ့ ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ညီလင်းဆက် ရေးထားတဲ့ How to assign Zawgyi-One font ကို သွားကြည့်ပါ...
how to Myanmar Blogger Template
Thank for this posting...can you say me ....how to install zawgi font and Alpha zawgi unicoat in window VISTA..
အဲဒီ့အတိုင်း Try ကြည့်တာ Compose ထဲမှာ စာတစ်ကြောင်းလုံး ပြန်ပေါ်နေတယ်ဗျ.
(font face=”Zawgyi-One”) ဒီစာကို Select ပေးပြီးရေးပါ…(/font) ဖြစ်နေတယ်.
အဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျ. ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပါ…ဒီ comment မှာ “ ( “ ပဲလက်ခံလို့ ပြောင်းရိုက်ထားကြောင်းပါ…
minn yoon thit ရေ...
အဲဒါဆိုရင် စာသားတွေရဲ့ အလယ်လောက်မှာ cursor ချပြီး ကိုယ်ရိုက်ချင်တာ ရိုက်ပြီး .. ပြီးမှ မလိုတဲ့ စာသားတွေ ပြန်ဖျက်ကြည့်ပါလား...
yes!but i have still problem.When i write between sample font..unfortunately, still english font is appear.pls help me!and any other sugguestion
minn yoon thitရေ...
Zawgyi-One သုံးရင်တော့ မြန်မာလို ပေါ်ဖို့အတွက် Zawgyi-One Keyboard Layout စက်ထဲကို install လုပ်ပေးစရာ လိုပါသေးတယ်... အဲဒါ မရှိဘဲ ရိုက်ရင် အင်္ဂလိပ်လိုသာ ပေါ်ကြောင်းပါ...
No,No!I'm ok with your sample myanmar font.yes!I have Zawgyi-One.and I can see your myanmar font.but when i type word,it is not appear with myanmar,it is only show me with english.what happen!I'm trying and learning to create myanmar blog since the last two days.I have been read ko nyi lynn, ko mg yoe(but his coding is good.butalittle diffcult for me) I have change code in my templete but i have still problem!not show.thanks for your suggestion!pls tell me another advice.
သမီးက လိုအပ်ရင်အကူအညီတောင်းမလို့ကြိုမိတ်ဆက်တာ။။သမီးအခုမှ blog လုပ်တာ။။လိုအပ်ရင် ဦးမောင်မောင်လှတို့ ၊ဦးညီလင်းဆက်တို့ ၊မမမေ တို့ ကို လှမ်းပြောမယ်။သမီးblog ပြီးသွားရင် blogလိပ်စာပို့ လိုက်မယ်ဗျိူ့ ။
Dear Ko Mghla,
I try to use Myanmar font in my blog as you said in your blog. But I’m not OK.I don’t know how to do on step 6. I don’t see “compose” . And there is no sentence as you said. I see only (font face="Zawgyi-One") ဒီစာကို Select ပေးပြီးရေးပါ...(/font) with unicode in myanmar font when I makeanew post. So please help me. I’m very eager to use Myanmar font in my blog.
you are so good in writing
dear ko mghla
now i can use myanmar font.thz alot.but you know when i makeanew post, there is only unicode and i can't see in myanmar .
when only i view my post, i see in myanmar font.Is it like this?
Thank Zillions Sayar Hla!
ကျေးဇူးဘဲ ကိုမောင်လှရေ .. ကျွန်တော်လည်း ပွဲပြတ်နေတာ အခုမှဘဲ ဆက်ကနိုင်တော့တယ်ဗျာ ..
Nwai Hninn said…
ကျေးဇူးပဲ ကိုမောင်လှရေ.. ဇော်ဂျီနဲ့ပို့စ်တင်တာ အဆင်ပြေသွားပြီ..
ko mg hla, why i always see square?i try nyi linn seck advice, but some other place i could not find, for example.,template, post,post title
thank you uhla
ko mg said…
ko mg hla
ko mg hla ..
I have read your blog . I want to makeablog.Then, I try it.It has many difficulties.Than you for your guide blog.
ဦးမောင်လှရေ.. ကျေးဇူးအများကြီး တင်တယ်ဗျာ.. ရသွားပြီ
I am glad to receive your technical advice and I am dying to blog in burmese and I don know whether I am successful or not.Cos I did everything you said but It didn't work I couldn't even read the commet that wrote here .But when I publish I could see the selet bar senctence again.I change the view to unicode but it didn't work My browser is IE may be6.Any suggestion.My mail is [email protected] forward to hear from you Saya Ah Ko Gyi
ko Mghla i want to known what is blog please expain me and teach me how to write blog
Binty Paul said…
Is there any typing tutor for Zawgyi myanmar typing. Bcuz I like to be influent in Zawgyi typing. Plz..help me
ကိုမောင်လှရေ ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ မြန်မာလိုရေးလို့ရဘီ ... ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ...
Thank you Ko Mg Hla
ကျေးဇူးကြီးပါပေတယ် ကို မောင်လှရယ်။ မြန်မာစာရိုက်လို.ရတာ။ မြန်မာက မြန်မာစကားနဲ.ပြောရမှ..ဖြစ်မှာ
ko maung hla yae ma ya bu pyit nay tae bal lo lote lo ya ma lae so dar email nae po pay par lar thanks alot par khin byar
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ စာဖတ်ဖို့အချိန်ကလည်း မအား ၊ အင်္ဂလိပ်စာကလည်း ညံ့တော့ အခုလိုမျိုး အကူအညီပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ သိချင်တာလေးတွေ စာရေးပြီး မေးမယ်နော်။
တစ်ခုလောက်ကူညီပါဗျာ. ကျွန်တော့ဘလော့ဂ်မှာ category ခွဲချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်က အခုမှ စရေးနေသူပါ။
မိုးယံရေ... blogspot မှာ category ခွဲတဲ့ဟာကိုတော့ ကျတော် မသိကြောင်းပါ... wordpress မှာတော့ category ခွဲတဲ့ ဟာ တစ်ခါတည်း ပါကြောင်းပါ...
ကျွန်တော့် ဘလော့က window explore မှာ မြန်မာလို ကောင်းကောင်းမြင်ရပြီး...mozilla firefox နဲ့ ကြည့်ရင် စာလုံးတွေက မကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်...အဲ့ဒါ ဘာကြောင့်ပါလဲခင်ဗျား..
http://blog.nyilynnseck.com/2006/08/how-to-assign-zawgyi-one-font.html ကနည်းနဲ့ လုပ်ကြည့်ပါဦး...
ko naing said…
အစ်ကိုရေ အဲ့ဒါဆို ရင် eot လုပ်ဖို့ လိုသေးလားဗျ။
@Ko Naing ခင်ဗျား...
eot က ကိုယ်သုံးထားတဲ့ font ကြည့်တဲ့သူစက်မှာ မရှိရင် မြင်အောင် ထည့်တာပါ... ဒီcode က သုံးထားတဲ့ font ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာပေးပြီး စာလုံးတွေ မှန်မှန်ကန်ကန် ပေါ်အောင် လုပ်ပေးတာပါ...
brother , i utterly say thank u that now ican type myanmar fonts on my blog cos ur guidence.
ကျနော် blog post တစ်ခုအတွင်းမှာ
ရေးထားတဲ့ စာသားတွေ ဘယ်ညာ ညီ
နေအောင် ဘယ်လို ပြင်ဆင်ရေးရသ
လဲ သိချင်လို့ပါ။ ကျနော့်ဆီမှာ ရှိတဲ့
အချက်အလတ်လေးတွေကို Share လုပ်
ချင်လို့ပါ။ ကူညီပါဦး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။